अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा कार्डबाटै ! – RemitKhabar
अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा कार्डबाटै !
by Remit Khabar - 16/08/2020 0
काठमाडौँ – अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा खल्तीमा पैसा होइन, कार्ड बोक्नुपर्ने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्न थालेपछि सार्वजनिक यातायातहरू कार्डबाट भाडा लिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् ।
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन सुरु
यो साता विदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या शून्य